अब कसको पालो? - सोफिया दाहाल | OB Media
अब कसको पालो? – सोफिया दाहाल
आवर बिराटनगर डटनेट | २८ मंसिर २०७७, आईतवार ०८:००
आज बिहानको अखबारमा यस्तो समाचार आएको थियो ; फेरी एक मासुमको बलात्कार भएको थियो।
यस्तो खबर त सधै सुनिन्छ अचेल। नारी जसलाई हामी सृस्टि कर्ता भन्छौ यो त केवल अब भनाइमा मात्र सिमित रहेको छ। जुन नारीले गर्दा हामी यस सृस्टिमा जन्म लियौ आज त्यहि नारी सुरकक्षित छैनन् । कुनै न कुनै गल्लिमा कसै न कसै को नियत खराब भएकै हुन्छ र त्यहि एक गल्लीमा नारीको जीवन हरण हुन पुग्छ। गिद्धले आफ्नो आहारा लुछे झैँ उसको शरिर लुछिन्छ। यहाँ छोरी चेलीलाई घरबाट निस्किन पनि लागि सक्यो डर, आफ्नै छर छिमेको पनि लाग्न छाडिसक्यो भर।
भन्ने पर्ने हो भने कुरा र काम त यहाँ ठुलै हुन्छ। मैनबत्ती बालिन्छ, बलात्कारीको बिरुद्ध आवाज उठाइन्छ। तर यिनीहरु नरपुरुसको लागि के येति नै काफी छ ? कानुनी सजाए मात्र काफी छ? भनौ कहिले त यो पनि मिल्दैन । यहाँ मासुमको इज्जत निलाम हुन्छ अनि हाम्रो समाजका तल्लो चेतका मानिसहरुको आवाज सुनिन्छ। कतै केटिको दोष थिएन ? हैन त्यो केटि को नियत नै त्यस्तै थियो। या भनम उसको कपडा छोटो थियो। हो हजुर यो चोटी चै छोटो नै थियो तर उसको कपडा हैन उसको उमेर छोटो थियो। कति इच्छा आकाङक्षा थियो होला। कति सपना बुनेकी थिइन् होला ति आमाले। पखेटा उठ्न नपाउदै लुछी दिन्छन पापी हरुले । बलात्कार गर्ने दोषी को मुख छोपिन्छ यहाँ अनि निर्दोष लाई नाङ्गो लास बनाएर घुमाइन्छ र कहिले त यी अपराधी हरु अपराध गर्नु अगाडी नै रिहाइको आबेदन लिएको हुन्छ। सच्चाईको आश राख्नु त कसको जब सरकार नै बिकेको छ यहाँ। यो कलियुगमा यहाँ सत्य को बस चल्दैन त्यसैले त कानुन हैन काल लाई डाक, यथावत रहेको सरकारले केहि गर्दैन।
दुख त तेतिबेला लाग्छ जब एक महिला रास्ट्रपति भएको देशमा दिनदिनै बढ्दो महिला हिंसा , हत्या, र बलात्कार को घटना सुनिन्छ। आखिर कहिले सम्म ? बालिका , किशोरी, देखि लिएर बृद्ध सम्म यहाँ कोही सुरक्षित छैनन्। आफ्नै घरमा, आफ्नै समाज , र आफ्नै श्रीमान बाट एक श्रीमती पनि सुरक्षित छैनन्। बैबाहिक बलात्कार पनि एक कानुनी अपराध हो तर हाम्रो समाजले अहिले सम्म यसलाई सुहीकार गरेको छैन । यसलाई अपराध मानिदैन हाम्रो समाजमा र पिडित नारीको आवाज सुनिदैन ।
भोलीको शिकार जो पनि हुन सक्छ । दिन दिनै यसरी घटना घट्दा, अबोध नारीहरु बलतकृत भएको खबर सुन्दा साचिँकै सोच्न बाध्य हुन्छु। अब कसको पालो ? यस्तो घटना घट्दा पनि हाम्रो कानुन अझै चुप किन छ ? खुले आम हिडी रहेका छन् यहाँ अपराधीहरु, निर्दोषी आत्माले भने बगाउनु पर्ने यहाँ आशुका धारा। कति सम्म सुन्ने येस्ता घटनाका समाचार ? भयो अब बलात्कारी लाई फासी दे सरकार ।
मुल बजारकै सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा
अध्यक्षद्वयको दुवै पत्र स्थायी समितिको ‘इमर्जिङ लिडरसीप’ले खारेज गर्छ : नेता बास्कोटा